Art. Daadhii Galaan Wadaajoo erga of biraa dhabnee guyyoota 23 dabarsinee jirra fi WBO Xoolaayi. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsArt. Daadhii Galaan Wadaajoo erga of biraa dhabnee guyyoota 23 dabarsinee jirra fi WBO Xoolaayi.
Koreen dhimma kana qulqulleessuuf dhaabbate dhugaa baasa jedhamee eegamaa ture bu’aa qaronnoo isaanii ummataaf osoo hin ibsin yeroo kanatti kanneeen akka .1 Inispeektar Girmaa Miidhagsaa (Ajajaa Poolisoota Aanaa Liiban ) 2 Yaasin itti A/Inispeektaraa 3.Saajin Tolosaa (Hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa) kan turan kaafamuun isaanii shira kaabinoonni Godina fi Aanaa L/Cuqqaalaa waa fayyadamanii dhugaa jiru dabsuuf xaxan ta’uun shakkii guddaa uumee jira . Hattoonni harka xurii kuni dhiiga Daadhiitiin dhiqatanii dhugaa goota kanaa awwaaluuf harka isaanii loosaa jiru . lafarra bubbutuu fi rincica baay’ateen Ummanni Aanichaa fi naannawa ishee jiraatan obsanii dadhabnaan guraandhala 23/06/2011 dhiibanii Magaala Adulaalaa uffisan. Bulchaa Aanaa kan ta’ee #Darsuu_Kafanii gaafii ummataa fuudhee Roobii 26/6/2011 hooggansa oromiyaa yaamee ummata akka eegu waadaa galee ture . Amma garuu duuba deebi’uun ummata dhiiga ilma isaa barbaacha baheen #shaneedha jedhee rukuchiisuuf murteessee jira waltajjiin waadaa galamees diigee waraanaa aanaa naqe jira ummata aanichaaf mootummaa haaromsaa jidduutti kaadiroonnii Aanaa fi Godinaa shira guddaa xaxanii jiru . Mootummaan dhugaa kana hubatee Ummata jagni irraa kufee Onneen isaa madaa’ee kana qabbaneessuu qaba malee kaadiree waaqaa lafti kaade dhaggeeffatee nageenye ummataa jeequu hin qabu shiraa fi xaxoo kaadiroota mootummaa ummata fi mootummaa jidduutti bool’a qoottuu cimsinee balaaleffanna kan Daadhii galafatee seeraf fuulduratti ifaan dhiyaate akka murtii seeraa argatu ni gaafanna
WBO mooraa Xoollaayi jiran maalkeessa jiru?
Kun yaada isaaniiti!
“Yeroo jalqaba Mooraa #sanqallee dhaqnee #Jawaariifi #Abdii_Raggaasaakan mootummaa irraa obbo #Mogoos kan jedhamu dhufanii haaldureen xoollaayittii isiniif guutamee jiraa achi deemaa nun jennaan didnee sana booda nuuf jedhaa dhaqaa guyyaa kamisaa dhufnee yoo isiniif ta’uu baate isinii jijirraa nun jedhan sana booda Jaawaariis tayee Abbootin bilbilaayyuu nurraa kaasuu didan .
Abbootiin gadaas opdonis Jawaariif Baqalaaniis asiin hin baane torban lamaf deemnaa leenjii waan jedhamus hin agarree nyaati keenyas Ganamaaf Galgagala Daabboodhuma. nyaati yeroo hundaa daabboo qofa jechuu kooti!
Haalli asii ni ho’a guyyaatti si’a 3 qaama dhiqanna halkaniis ni dhiqanna mukti gaaddisa qabu hin jiru, nyaati ni guba, lafti ni guba,yeroo unka guunnu iddoo irraa qabame jedha,kanaaf guutu dhiisne deebisan ciree,laaqana,irbaatni hundumtuu Daabboo shiroon nyaattaa jijjiirraa uffataas hin qabu rakkannee hidha wajjiin tokkuma kan nu eegaa jiru immoo kora bittineessaadha mooraa keessaa immoo RIB,polisi Federaalaa hundumtuu jiru iddoon nuti keessaa sochoonuu daangaawaadha.
Ijoolleen hedduun dhukkubaan saaxilamanii wallansa dhabanii jiru
Dhaamsa tokkon qaba dhaamsikoos WBO bosona jiraniif Hadaraa,hadaraa,hadaraa warrii bosona jiru yoo rukutuu dhiisanii maqaaf jiraataniyyuu bu’aa guddaadha Adaraa Akka nuti taane hin tayinaa Jabaadhaa mudhii keessan jabeeffadhaa kan kiyyoo kanaaf nusaaxile Diinaraas,Obbo Baqalaa Garbaa ,Jawaar Maammadiif Bayyanaa sanbatooti.”
WBOn Xollaay jiran darara guddaa kessa akka jiran ibsataa jiruu.
Qamnii Xollaayitti dhufne sindubbifna achi seenaa nun jadhees hindhufnee, bilbilas nurraa hinkaasan jedhu.
RIB fi Polisii Fedaraalaan marfamanii akka egamaa jirani fi Nyaata gahaa fi Waldhaansas akka dhorkaman dubbatu.
Unkii akka gunnuf gaafatamnees ’Bakka irraa qabame’ waan jedhuuf gutuu didnee jirra jedhu.
WBO Bosona jirufiis kan nu irraa gahee akka sin hinqaqqabne of eggadhaa jedhanii dhaammatu.
WBOn haa hikkattun Kana fidee!! Nama Gaddisisa!!